शीर्षकमा बाइबल पदहरू: पूजा -> चर्च
२ इतिहास १६:२३-३१
 तिनीहरूले परमप्रभुको व्‍यवस्‍थाको पुस्‍तक लिएर गई त्‍यसबाट शिक्षा दिंदै यहूदाका सारा सहरमा गए। चारैपट्टिका देशहरूका राजाहरूमाथि परमप्रभुको भय परेकाले तिनीहरू यहोशापात राजाका विरुद्धमा लडाइँ गर्न डराए। यहोशापातकहाँ कोही पलिश्‍तीहरूले धेरै चाँदी र अन्‍य उपहारहरू र केही अरबीहरूले ७,७०० भेडा र ७,७०० बोकाहरू ल्‍याए। यसरी यहोशापात झन् बलिया हुँदैगए। यहूदा देशभरि उनले किल्‍ला र सहरहरू बनाए र त्‍यहाँ धेरै मात्रामा धेरै थोकका भण्‍डारहरू बनाए। यरूशलेममा तिनले नाम चलेका अधिकृतहरूलाई परिवार-परिवारअनुसार काम गर्न खटाए। यहूदाबाट फौजका सेनापति अदनाह थिए। उनको अधीनमा ३,००,००० सिपाहीहरू थिए। उनीपछि दोस्रो दर्जामा सेनापति येहोहानान थिए। उनको अधीनमा २,८०,००० सिपाही थिए। जिक्रीका छोरा अमसिया तेस्रो दर्जामा सेनापति थिए। तिनीसित २,००,००० सिपाहीहरू थिए। (अमसिया परमप्रभुको सेवाको निम्‍ति आफ्‍नै इच्‍छाले काम गर्न आएका थिए।) बेन्‍यामीन गोत्रका फौजका सेनापति एल्‍यादा थिए। उनी एक प्रमुख योद्धा थिए र दुई लाख धनु-काँड र ढाल भिरेका सिपाहीहरू उनका अधीनमा थिए।
“परमेश्‍वर बुद्धिमान् र पराक्रमी हुनुहुन्‍छ! सदासर्वदा नै उहाँको जयजयकार गर!
उहाँको प्रशंसा गर— उहाँ तिम्रा परमेश्‍वर हुनुहुन्‍छ र उहाँले तिम्रो निम्‍ति गर्नुभएको महान् र अचम्‍मका कामहरू तिमीहरूले आफ्‍नै आँखाले देखेका छौ।
परमप्रभुको निम्‍ति भजन गाओ! परमप्रभुको प्रशंसा गर! उहाँले दरिद्रहरूलाई दुष्‍टहरूका हातबाट बचाउनुहुन्‍छ।
हामी तपाईंलाई धन्‍यवाद चढाउँछौं, हे परमेश्‍वर! हामी तपाईंलाई धन्‍यवाद चढाउँछौं। तपाईं कति महान् हुनुहुन्‍छ र तपाईंले कति उदेकका कामहरू गर्नुभएको छ, सो हामी घोषणा गर्दछौं।
 “म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वर हुँ, तिमीहरू दास-दासी भएर बसेका मिश्रदेशबाट मैले तिमीहरूलाई निकाली ल्‍याएँ। “मबाहेक अरू कुनै देवता-देवीलाई तिमीहरूले नपुज्‍नू। “तिमीहरूले आफ्‍नो लागि स्‍वर्ग वा पृथ्‍वी वा पृथ्‍वीमुनि पानीमा भएको कुनै पनि कुराको मूर्ति नबनाउनू। तिमीहरूले कुनै मूर्तिलाई नढोग्‍नू न त तिनीहरूको पूजा नै गर्नू किनभने म तिमीहरूका परमेश्‍वर परमप्रभु हुँ अनि कोही मजस्तै हुन खोजेको म सहन्‍नँ। मलाई घृणा गर्नेहरूलाई तिनीहरूका सन्‍तानका तेस्रो र चौथो पुस्‍तासम्‍म म दण्‍ड दिनेछु। तर जसले मलाई प्रेम गर्छ र मेरा आज्ञा मान्‍छ, तिनीहरूका हजारौँ पुस्‍ताहरूमाथि म मेरो प्रेम देखाउनेछु।
 येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “मलाई विश्‍वास गर, त्‍यो बेला आउँदै छ, जब मानिसहरू परमेश्‍वर पिताको पूजा गर्न नता यस डाँडामा नता यरूशलेममा जानेछन्। तिमी सामरीहरू परमेश्‍वरलाई चिन्‍दैनौ र पनि पुज्‍दछौ। हामीले परमेश्‍वरलाई चिनेर पुज्‍दछौं कारण मानिसको मुक्तिचाहिँ यहूदीहरूबाट नै आउँछ। तर समय आउँदै छ र अहिले नै आइसकेको छ, साँचो पूजा गर्नेहरूले पितालाई सत्‍य र आत्‍माले पुज्‍नेछन्। यसरी पुज्‍ने मानिसहरूलाई परमेश्‍वर पिताले चाहनुहुन्‍छ। परमेश्‍वर आत्‍मा हुनुहुन्‍छ र उहाँलाई पुज्‍नेहरूले आत्‍मा र सत्‍यतामा पुज्‍नुपर्छ।”
 परमप्रभु राजा हुनुहुन्‍छ, मानिसहरू काँप्‍दछन्, उहाँ पखेटा भएका जीवमाथि बसालेको सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्‍छ र पृथ्‍वी हल्‍लँदछ। परमप्रभु सियोनमा महान् हुनुहुन्‍छ, सबै जातिहरूमाथि उहाँ सर्वोच्‍च हुनुहुन्‍छ। सबैले उहाँको महान् र गौरवपूर्ण नामको प्रशंसा गर्दछन्। उहाँ पवित्र हुनुहुन्‍छ! सामर्थी राजा, जे ठीक छ, त्‍यो तपाईंले प्रेम गर्नुहुन्‍छ, तपाईंले इस्राएलमा न्‍याय कायम गर्नुभएको छ, धार्मिकता र न्‍याय ल्‍याउनुभएको छ। परमप्रभु हाम्रा परमेश्‍वरको प्रशंसा गर; उहाँको सिंहासनको सामु दण्‍डवत् गर। उहाँ पवित्र हुनुहुन्‍छ! मोशा र हारून उहाँका पूजाहारीहरू थिए, उहाँलाई प्रार्थना गर्ने एक जना शमूएल थिए, तिनीहरूले परमप्रभुलाई पुकारे र उहाँले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो। उहाँले बादलको खाँबोबाट तिनीहरूसँग बोल्‍नुभयो, उहाँले दिनुभएका नियम र आज्ञाहरू तिनीहरूले पालन गरे। हे परमप्रभु, हाम्रा परमेश्‍वर, तपाईंले आफ्‍ना प्रजालाई जवाफ दिनुभयो, तपाईंले तिनीहरूलाई तिनीहरूका पापको दण्‍ड दिनुभए तापनि म क्षमा दिने परमेश्‍वर हुँ भनी तपाईंले तिनीहरूलाई देखाउनुभयो। परमप्रभु हाम्रा परमेश्‍वरको प्रशंसा गर र उहाँको पवित्र पहाडमा उपासना गर! परमप्रभु हाम्रा परमेश्‍वर, पवित्र हुनुहुन्‍छ।
आज यहाँ खडा हुने पुरुष, स्‍त्री, परिवार र कुलले हामी कोही पनि परमप्रभु हाम्रा परमेश्‍वरबाट फर्केर र अरू जातिका देव-देवताको पूजा गर्नेछैनौं भनी पक्‍का सङ्कल्‍प गर। नत्रता त्‍यो जरा बढेर एउटा तीतो र विषालु बोट बनेको जस्‍तो हुनेछ।
शमूएलले भने, “परमप्रभुले कुन कुरा बढ्ता रुचाउनुहुन्‍छ? आज्ञापालन, भेटी वा बलि? सबैभन्दा असल भेडा बलिदान गरेको भन्दा उहाँको आज्ञापालन गरेको अझ बढी असल हो।
 ती चारवटा जीवित प्राणीहरूका छ-छवटा पखेटा थिए र ती पखेटाहरूका बाहिर र भित्र दुवैपट्टि आँखाहरूले भरिएका थिए। रातदिन उनीहरूले नरोकीकन यसो भन्‍दै गीत गाइरहेका थिए, “सर्वशक्तिमान् परमप्रभु परमेश्‍वर पवित्र, पवित्र, पवित्र हुनुहुन्‍छ। उहाँ हुनुहुन्‍थ्‍यो, उहाँ हुनुहुन्‍छ र उहाँ हुनुहुनेछ।” सदासर्वदा जीवित रहनुहुने अनि सिंहासनमा विराजमान् हुनुहुनेलाई ती चारवटा जीवित प्राणीहरूले सम्‍मान्, आदर र धन्‍यवादको गीत गाइरहेका थिए। उनीहरूले गीत गाउँदा-गाउँदै सदासर्वदा जीवित अनि सिंहासनमा विराजमान् हुनुहुनेको अगाडि ती चौबीस जना धर्म-गुरुहरूले दण्‍डवत् गरे र आफ्‍ना मुकुट उहाँको चरणमा टक्र्याउँदै यसो भने, “हे हाम्रा प्रभु परमेश्‍वर, तपाईं सम्‍मान्, आदर र अधिकारको योग्‍यको हुनुहुन्‍छ किनभने सबै तपाईंले नै सृष्‍टि गर्नुभएको हो र तपाईंकै इच्‍छाअनुसार ती हुन आए र जीवन पाएका छन्।”
परमप्रभुले भन्‍नुभयो, “यी मानिसहरूले मलाई पुज्‍नेछन् भनी दाबी गर्छन् तर तिनीहरूका बोलीको केही अर्थ लाग्‍दैन किनभने तिनीहरूको मन मदेखि टाढा छ। तिनीहरूको धर्म तिनीहरूले कण्‍ठै गरेका मानिसका नियमहरू र परम्‍पराहरू मात्र हुन्, अरू केही होइनन्।
 हे स्‍वर्गका दूतहरू हो! परमप्रभुको प्रशंसा गर, उहाँको महिमा र सामर्थ्‍यको प्रशंसा गर। परमप्रभुको गौरवमय नाउँको प्रशंसा गर, परमपवित्र देखा पर्नुहुँदा उहाँको अघि शिर निहुराऊ। समुद्रमा परमप्रभुको स्‍वर सुनिन्‍छ, महिमाका परमेश्‍वर गर्जनुहुन्‍छ र समुद्रमा उहाँको स्‍वरको प्रतिध्‍वनि सुनिन्‍छ। परमप्रभुको स्‍वर पूरा महिमा र सामर्थ्‍यमा सुनिन्‍छ। परमप्रभुको स्‍वरले देवदारुहरू, लेबनानका देवदारुहरू पनि भाँचिन्‍छ। उहाँले लेबनानका पहाडहरूलाई बाछाझैँ र हरमोन पहाडलाई साँढेझैँ उफार्नुहुन्‍छ। परमप्रभुको सोरले बिजुली चम्‍कँदछ उहाँको स्‍वरले मरुभूमि थर्काउँदछ, उहाँले कादेशको मरुभूमि हल्‍लाउनुहुन्‍छ। परमप्रभुको सोरले फलाँटका रूखहरूलाई हल्‍लाउँदछ र त्‍यसका पातहरू झर्दछन्, त्‍यति बेला उहाँको मन्‍दिरमा भएका सबै जनाले जोडसँग भन्‍दछन्, “परमेश्‍वरलाई महिमा होस्!” परमप्रभुले गहिरो समुद्रमा राज्‍य गर्नुहुन्‍छ, राजा भई उहाँले सदाकालको लागि राज्‍य गर्नुहुन्‍छ। परमप्रभुले आफ्‍ना जनहरूलाई बल दिनुहुन्‍छ र तिनीहरूलाई शान्‍तिको आशिष् दिनुहुन्‍छ।
 यसकारण हल्‍लाउनै नसकिने राज्‍य हामीले पाएकोमा परमेश्‍वरलाई धन्‍यवाद चढाऔं अनि उहाँलाई मन पर्ने किसिमले भक्ति र आदरसँग उहाँको आराधना गरौं किनभने साँच्‍चै हाम्रा परमेश्‍वर त भस्‍म गर्ने आगो हुनुहुन्‍छ।
 येशूअ, कादमीएल, बानी, हशबन्‍याह, शरेबियाह, होदियाह, शबन्‍याह र पतहियाह लेवीहरूले आराधना गर्न मानिसहरूलाई निम्‍त्‍याउँदै यसो भने: “खडा होओ र आफ्‍ना परमेश्‍वरलाई प्रशंसा गर! सदाकालको निम्‍ति उहाँको प्रशंसा गर! मानिसले गरेको प्रशंसा उहाँको महान्‌तालाई सुहाउँदो त हुँदैन, तापनि हरेकले उहाँको महिमाले भरिएको नामको प्रशंसा गर।” तब इस्राएलीहरूले यसरी प्रार्थना गरे: “हे परमेश्‍वर, तपाईं मात्र परमप्रभु हुनुहुन्‍छ; तपाईंले स्‍वर्ग, तारा र आकाश बनाउनुभयो। तपाईंले पृथ्‍वी, समुद्र र तिनमा भएका हरेक चीज बनाउनुभयो; तपाईंले सबैलाई जीवन दिनुभयो। स्‍वर्गका शक्तिहरूले शिर निहुराएर तपाईंलाई दण्‍डवत् गर्छन्।
 तपाईंले बचाउनुभएका सबै जातिहरूले आएर तपाईंलाई दण्‍डवत् गर्नेछन्, तिनीहरूले तपाईंको महान्‌ताको प्रशंसा गर्नेछन्। तपाईं सामर्थी हुनुहुन्‍छ र उदेकका कामहरू गर्नुहुन्‍छ, तपाईं एक मात्र परमेश्‍वर हुनुहुन्‍छ।
२ राजा १७:३८-३९
 अनि मैले तिमीहरूसित बाँधेको करार बिर्सनेछैनौ। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वरका आज्ञा मान्‍नेछौ र म तिम्रा शत्रुहरूबाट तिमीहरूलाई बचाउनेछु।”
 सारा संसारले परमप्रभुको स्‍तुति गर! परमप्रभुलाई आनन्‍दसाथ उपासना गर, आनन्‍दका भजन गाएर उहाँको सामु आओ! परमप्रभु परमेश्‍वर हुनुहुन्‍छ; यो कहिल्‍यै नभुल, उहाँले हामीलाई बनाउनुभयो र हामी उहाँका हौं, हामी उहाँका प्रजा हौं, उहाँका बथानका भेडाहरू हौं। उहाँको मन्‍दिरका मूल-ढोकामा धन्‍यवादसित पस, उहाँका आँगनमा प्रशंसा गर्दै जाओ, उहाँलाई धन्‍यवाद चढाओ र प्रशंसा गर। परमप्रभु भलो हुनुहुन्‍छ, उहाँको प्रेम अनन्‍तसम्‍म रहिरहन्‍छ र उहाँको विश्‍वासयोग्‍यता सदाकालको निम्‍ति रहँदछ।
 शद्रक, मेशक र अबेद्‌नगोले जवाफ दिए, “महाराज, हामीले यस विषयमा आफैंलाई बचाउने कोसिस गर्नेछैनौं। हामी जुन परमेश्‍वरको सेवा गर्छौं, उहाँले नै आगो दन्‍किरहेका भट्टीबाट र हजुरका हातबाट हामीलाई बचाउन सक्‍नुहुन्‍छ भने उहाँले अवश्‍यै हाम्रो रक्षा गर्नुहुनेछ। तर उहाँले हामीलाई बचाउनुभएन भने पनि हामी हजुरका देवताहरू पुज्‍नेछैनौं र हजुरले खडा गर्नुभएको सुनको मूर्तिलाई घोप्‍टो परी ढोग्‍नेछैनौं। यो कुरो हजुरलाई पक्‍का थाहा होस्।”
तिनले ठूलो सोरले भने, “परमेश्‍वरको डर मान र उहाँको प्रशंसा गर किनभने उहाँले मानिस जातिको न्‍याय गर्ने बेला आइसकेको छ। आकाश, पृथ्‍वी, समुद्र र सब पानीका मूलहरू बनाउनुहुने परमेश्‍वरलाई मान-आदर देओ।”